Raharaha solomaso, lamba solomaso, frame optika - fiaraha-mahita
EO anaty indostria izahay, ka tsy mila
Wuxi CO-See Packing dia iray amin'ireo mpanamboatra solomaso, tranga solomaso ary kojakoja fitaratra eo amin'ny sehatry ny optika. Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny 10 taona, Co-See dia manome serivisy miavaka, vokatra avo lenta ary vidin'ny fifaninanana ary koa manolotra fahaizan'ny famolavolana hamoronana tranga sy kojakoja namboarina. Amin'ny fampiasana ny haitao mandroso indrindra, manao fanaraha-maso kalitao mitohy sy henjana amin'ny vokatra izahay mandritra ny fizotry ny famokarana manontolo, mahafantatra tsara ny zava-misy fa ny orinasanay dia manampahaizana manokana amin'ny OEM ary ny vokatray dia raisina tsara eo amin'ny tsena ao an-trano sy any ivelany. Miara-miasa amin'ny orinasanay, hahita tontolo mamiratra kokoa isika!
Miara-miasa amin'ny orinasanay, hahita tontolo mamiratra kokoa isika!
Wuxi CO-See Packing dia iray amin'ireo mpanamboatra solomaso, tranga solomaso ary kojakoja fitaratra eo amin'ny sehatry ny optika.
GlassTec - Fanamby vaovao
Ny Glasstec VIRTUAL tamin'ny 20 ka hatramin'ny 22 Oktobra dia nahatanteraka ny elanelana misy ankehitriny sy ny glasstec ho avy amin'ny volana Jona 2021. Miaraka amin'ny foto-keviny misy ny famindrana fahalalana dizitaly, ny fahafaha-manao fampisehoana an-tsary ho an'ireo mpampiranty ary koa ireo safidy tambajotra virtoaly fanampiny, resy lahatra ...
Ny LOFT Eyewear Shows dia hetsika eyewear tsy miankina voalohany izay atao isan-taona any New York City, Las Vegas ary any San Francisco. Nanomboka ny taona 2000, ny hetsika LOFT dia nampiseho ireo mpamorona endrika tokana sy manaparitaka eran'izao tontolo izao. Vondron'olona mitovy hevitra sy mpamorona mahaleo tena ...
Fampirantiana nomerika iraisam-pirenena momba ny varotra any Sina any Beijing
China Europe International Trade Digital Exhibition, izay notohanan'ny China CCPIT, China Chamber of International Commerce ary China Service Trade Association miaraka dia natao tao Beijing tamin'ny 28 Oktobra tamin'ity taona ity. Ity fampirantiana ity dia ho fahatsiarovana ny faha-45 taonan'ny dipino sinoa-eropeana ...
Kolontsaina mifangaro avo lenta nylon azo ovaina Read ...
CoSee Anti Fog Glasary Lens Cleaner Liquid Solu ...
Vaovao farany lamaody lehibe PC Frame Pilot Nose Br ...
2020 lamaody lamaody lamaody marika marika metaly toradroa ...
Vonona handefa solosaina mikraoba vita amin'ny Suede Anti Fog ...